1 Kumkani 4 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Kumkani 4:1-34
4 UKumkani uSolomon waqhubeka engukumkani kaSirayeli wonke.+ 2 Zizo ezi iinkosana+ awayenazo: uAzariya unyana kaTsadoki,+ umbingeleli; 3 uElihorefe noAhiya, oonyana bakaShisha, oonobhala;+ uYehoshafati+ unyana ka-Ahiludi, owayegcina ingxelo; 4 uBhenaya+ unyana kaYehoyada wayephethe umkhosi,+ yaye uTsadoki noAbhiyatare+ babengababingeleli; 5 uAzariya unyana kaNatan+ wayephethe amasekela, yaye uZabhudi unyana kaNatan wayengumbingeleli, umhlobo+ kakumkani; 6 uAhishare wayephethe indlu, yaye uAdoniram+ unyana ka-Abheda, ephethe abo babebhaliselwe ukusebenza ngokuqhutywa ngebhaxa.+ 7 USolomon wayenamasekela alishumi elinesibini kuSirayeli wonke, kwaye ayelungiselela ukumkani nendlu yakhe ukutya. Kwakuba phezu kwakhe ngamnye ukulungiselela ukutya inyanga enye ngonyaka.+ 8 Kwaye la ngamagama awo: Unyana kaHure, kummandla weentaba wakwaEfrayim;+ 9 unyana kaDekere, eMakatse naseShahalebhim+ naseBhete-shemeshe+ nase-Elon-bhete-hanan; 10 unyana kaHesedi, eArubhoti (wayeneSokho nalo lonke ilizwe laseHefere);+ 11 unyana ka-Abhinadabhi, wonke ummango weentaba zaseDore+ (uTafati, intombi kaSolomon, waba ngumfazi wakhe); 12 uBhana unyana ka-Ahiludi, eTahanaki+ naseMegido+ nayo yonke iBhete-sheyan,+ engaseTsaretan+ ezantsi kweYizereli,+ ukusuka eBhete-sheyan ukuya eAbheli-mehola+ ukuya kummandla waseYokemam;+ 13 unyana kaGebhere, eRamoti-giliyadi+ (wayenedolophana yeentente kaYayire+ unyana kaManase, eziseGiliyadi;+ wayenommandla waseArgobhi,+ eseBhashan:+ izixeko ezikhulu ezingamashumi amathandathu ezinodonga nomvalo wobhedu); 14 uAhinadabhi unyana kaIdo, eMahanayim;+ 15 uAhimahatse, kwaNafetali+ (naye, wathabatha uBhasemati, intombi kaSolomon, waba ngumfazi wakhe);+ 16 uBhana unyana kaHushayi, eAshere+ naseBheyaloti; 17 uYehoshafati unyana kaParuwa, kwaIsakare;+ 18 uShimeyi+ unyana kaEla, kwaBhenjamin;+ 19 uGebhere unyana kaUri, kwilizwe laseGiliyadi,+ ilizwe likaSihon+ ukumkani wama-Amori,+ nelikaOgi+ ukumkani waseBhashan,+ yaye kwakukho isekela elinye elaliphethe onke amanye amasekela awayekwelo lizwe. 20 UYuda noSirayeli babebaninzi njengentlabathi yolwandle,+ besidla kwaye besela benemihlali.+ 21 Ke yena uSolomon, waba ngumlawuli wabo bonke ubukumkani ukususela eMlanjeni+ ukusa kwilizwe lamaFilisti nakumda waseYiputa. Babesizisa izipho kwaye bekhonza uSolomon yonke imihla yobomi bakhe.+ 22 Ukutya kukaSolomon suku ngalunye rhoqo yayingumlinganiselo weekore+ ezingamashumi amathathu zomgubo ocolekileyo nomlinganiselo weekore ezingamashumi amathathu zomgubo, 23 iinkomo ezilishumi ezityebileyo neenkomo zasedlelweni ezingamshumi amabini nezimvu ezilikhulu, ngaphandle kwamaxhama+ namabhadi+ namanqa namagwababa atyetyisiweyo. 24 Kuba wayenobukhosi kuyo yonke into eyayinganeno koMlambo+, ukusuka eTifesa ukuya eGaza,+ kwanakubo bonke ookumkani ababenganeno koMlambo;+ kwaye waba noxolo+ kuyo yonke imimandla yakhe, macala onke. 25 Kwaye uYuda+ noSirayeli baqhubeka behleli ngonqabiseko,+ wonk’ ubani phantsi komdiliya wakhe naphantsi komkhiwane wakhe,+ ukusuka kwaDan kuse eBher-shebha,+ yonke imihla kaSolomon. 26 Yaye uSolomon wayenamashumi amane amawaka ezitali zamahashe+ eenqwelo zakhe+ nabakhweli-mahashe abalishumi elinesibini lamawaka. 27 Yaye la masekela+ ayebonelela ngokutya uKumkani uSolomon naye wonk’ ubani owayesondela etafileni kaKumkani uSolomon, ngalinye ngenyanga yalo. Ayeqiniseka ukuba akusweleki nto. 28 Yaye irhasi neendiza zamahashe nezamaqela amahashe+ ayeqhubeka ezizisa kuyo nayiphi na indawo ekwakufanele ziye kuyo, ngalinye ngokomiselo lwalo.+ 29 UThixo waqhubeka emnika uSolomon ubulumko+ nokuqonda+ ngomlinganiselo omkhulu kakhulu nobubanzi bentliziyo,+ njengentlabathi eselunxwemeni lolwandle.+ 30 Yaye ubulumko bukaSolomon babubuninzi ngakumbi+ kunobulumko bonke baseMpumalanga+ nakunabo bonke ubulumko baseYiputa.+ 31 Yaye wayelumke ngakumbi kunaye nawuphi na omnye umntu, kunoEtan+ umEzera noHeman+ noKalkoli+ noDarda oonyana bakaMaholi; kwaye waba nodumo kuzo zonke iintlanga macala onke.+ 32 Yaye wayenokuthetha imizekeliso+ engamawaka amathathu, kwaye iingoma zakhe+ zaba liwaka elinesihlanu. 33 Yaye wayethetha ngemithi, ukususela kumsedare oseLebhanon+ kuse kwihisope+ ephuma eludongeni; kwaye wayethetha ngezilo+ nangezidalwa eziphaphazelayo+ nangezinto ezinambuzelayo+ nangeentlanzi.+ 34 Yaye babeqhubeka besiza bevela kuzo zonke izizwana beze kuva ubulumko bukaSolomon,+ kwanakubo bonke ookumkani bomhlaba ababevile ngobulumko bakhe.+
1 Kumkani 4